China HRC55 Carbide 3 Flute Long Long End Mills ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy Aluminium | Mingtaishun
HRC55 Carbide 3 Flute Long Length End Mills ho an'ny Aluminium
Fitaovana mivaingana: Ampiasao ny ZK30UF miaraka amin'ny atiny 10% Co sy ny haben'ny voany 0.6um. Sodina: sodina 3, manalefaka ny vibraation sy fanapahana milamina
Karazana iray: Ny famolavolana roa sosona dia manome famaranana tsara ary mety amin'ny milina semi-finish sy vita.
B Type: endrika tokana, sisin-tany maranitra, tsara ho an'ny fanesorana puce, haingam-pandeha haingam-pandeha, be mpampiasa amin'ny milina marokoroko.
savaivony Halava manapaka Shank Diameter Halava ankapobeny sodina
Miaraka amin'ny tanjon'ny "zero defect". Mikarakara ny tontolo iainana, sy ny fiverenana ara-tsosialy, hikarakara ny andraikitra ara-tsosialin'ny mpiasa ho adidinao manokana. Miarahaba antsika namana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao hitsidika sy hitarika anay hahafahantsika miaraka manatratra ny tanjona mandresy.
Miaraka amin'ireo fanohanana rehetra ireo, afaka manompo ny mpanjifa tsirairay izahay amin'ny vokatra avo lenta sy fandefasana ara-potoana miaraka amin'ny andraikitra lehibe. Amin'ny maha-orinasa tsy mitsaha-mitombo, dia mety tsy ny tsara indrindra izahay, fa kosa miezaka mafy mba ho tonga mpiara-miasa tsara.
Raisinay an-tsitrapo ny mpanjifa anatiny sy ampitan-dranomasina hitsidika ny orinasanay ary hiresaka raharaham-barotra. Ny orinasanay dia manizingizina hatrany ny fitsipiky ny "kalitao tsara, ny vidiny mirary, ny serivisy kilasy voalohany". Vonona izahay ny hiara-miasa aminao maharitra sy sariaka ary mifanasoa.
Ny iraka ataontsika dia "Manomeza vokatra misy kalitao azo antoka sy vidiny mirary". Miarahaba ny mpanjifa avy amin'ny vazan-tany rehetra izahay hifandray aminay amin'ny fifandraisana amin'ny raharaham-barotra amin'ny ho avy sy hahatratra ny fahombiazan'ny fiaraha-miasa!
Teo aloha: HRC60 Carbide 2 Flute Micro End Mill
Manaraka: 55 HRC 2 Volom-borona Tapered Ball Nose End Mill
Fitoeram-pamokarana 3 Flute